CR2032 ibhethri: konke mayelana namabhethri enkinobho athandwa kakhulu | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
CR2032 ibhethri: konke mayelana namabhethri enkinobho athandwa kakhulu
Enye yamafomethi adume kakhulu wezitaki noma amabhethri yi-CR2032, amabhethri enkinobho ejwayelekile anenombolo enkulu yamadivayisi. Kusuka kwamanye ama-calculator kuya kuma-boardboard we-computer ukugcina isikhathi nezilungiselelo ze-BIOS / UEFI, ngokusebenzisa amawashi, abalawuli, ama-headphone, njll. Lolu hlobo lwebhethri lubonakala ngokuqina kwalo okukhulu nosayizi walo omncane uma kuqhathaniswa namanye amafomethi afana ne-AAA, AA, C, D ne-9V.
Kukhona okuhlukile imikhiqizo, njenge-Sony, i-Duracell, i-Maxell, nabanye abakhiqizi abaningi. Intengo yayo icishe ibe ngu- € 1,75 noma u- € 2, yize ungathola amabhamuza anamabhethri amaningana e-CR2032 ngamanani ashibhile lapho uwathenga ngamaphakethe. Intengo nokuzimela akuyona ukuphela kwento ebenza bakhange, nobukhulu babo, ngakho-ke baphelele kumadivayisi amancane lapho ufuna khona ukuhamba okukhulu noma ukunciphisa usayizi webhethri kuze kufike ekugcineni.
1 Izinkinobho zamabhethri
2 Ukucaciswa kwe-CR2032 nama-datasheet
Iseli Eliluhlaza 2032 - Inqwaba ...
Amabhethri wohlobo lwezinkinobho afakwa encanyana ukufakwa kwensimbi okwenziwe ngenkinobho, yingakho igama layo. Kobunye bobuso babo banesigxobo esihle, esihambelana nobuso nobubanzi obukhulu kunabo bonke, okungukuthi, lapho bavame ukuba nophawu nemibhalo eqoshiwe. Ebusweni emuva kunepali elibi. Ukuzixhuma, ukuxhumana nesisekelo esinomqhubi ukuze kuxhunywe isigxobo esibi ne-flange exhumanisa ezinhlangothini nasendaweni ephezulu (+) kuvame ukusetshenziswa. Ngale ndlela, ibhethri ingaphakanyiswa kolunye uhlangothi lwayo ukuyikhipha bese uyibuyisela kalula.
Ngokuqondene ne okokuziqamba, ingenziwa nge-mercury (engasetshenziswanga ngokungayihloniphi imvelo), i-cadmium, i-lithium, njll. Ukushaja okuqukethe kwesinye isikhathi kwanele ukuphakela amandla iminyaka emi-3 kuye kwengu-5, kuya ngokusetshenziswa kwensimbi. Ngaphezu kwezindleko zabo eziphansi nempilo ende, ukungezwani okukhiqizwa ngesikhathi sokukhishwa kufana kakhulu, okubenza baphelele ukugwema ama-spikes noma ukungahambisani kahle ngokuhamba kwesikhathi. Futhi ukushisa kokukhipha kuphansi ukuthi kuhlanganiswe kumadivayisi amancane.
I-CR2032, njengamanye amabhethri enkinobho, ivelela yona ukusimama okuphezulu ekuguqukeni kwemvelo, okuthile amanye amabhethri angakusekeli kahle kangaka. Isebenza ezinhlobonhlobo zamazinga okushisa, kusuka ku -20ºC kuye ku-60ºC. Amazinga okushisa abenza baphelele ezindaweni ezishisayo nezibandayo. Futhi kuhle ukugcinwa, ngoba banokuzikhiphela okungaphansi kwe-1% ngonyaka, okukuvumela ukuthi kugcinwe izikhathi ezi-5 amanye amabhethri azobamba.
Kusatshalaliswe ku- amafomethi ahlukahlukene ahlukile ngosayizi, uhlobo, ama-voltages, amandla nesisindo, futhi angavuselelwa, njengoba ubona etafuleni elilandelayo nokunye okudume kakhulu:
I-Denomination I-Tipo Amandla (V) Amandla (mAh) Isisindo (g) Ububanzi (mm) Ukuphakama (mm)
CR927 ILithium 3 30 0,60 9,5 2,7
CR1025 ILithium 3 30 0,6 10 2,50
CR1130 ILithium 3 40 0,6 11 3
CR1212 ILithium 3 18 0,5 12 1,2
CR1216 ILithium 3 25 0,7 12 1,6
CR1220 ILithium 3 38 0,85 12 2
CR1225 ILithium 3 48 10 12 2,5
CR1616 ILithium 3 50 1,2 16 1,6
CR1620 ILithium 3 68 1,3 16 2
CR1625 ILithium 3 90 1,4 16 2,5
CR1632 ILithium 3 125 1,6 16 3,2
CR2012 ILithium 3 55 1,80 20 1,2
CR2016 ILithium 3 80 1,80 20 1,60
CR2020 ILithium 3 115 1,90 20 2
CR2025 ILithium 3 170 2,40 20 2,50
CR2032 ILithium 3 235 30 20 3,20
CR2040 ILithium 3 280 40 20 4
CR2050 ILithium 3 310 4,80 20 5
CR2320 ILithium 3 150 2,90 23 20
CR2325 ILithium 3 190 3,50 23 2,50
CR2330 ILithium 3 250 40 23 30
CR2354 ILithium 3 350 4,50 23 5,40
CR2430 ILithium 3 285 4,50 24 30
CR2450 ILithium 3 540 6,50 24 50
CR2477 ILithium 3 950 8,3 24 7,7
CR3032 ILithium 3 560 80 30 3,20
I-CTL920 I-lithium ion 2,3 5,5 0,5 9 2
I-CTL1616 I-lithium ion 2,3 18 1,6 16 1,60
LR41 Okune-alikhali 1,5 40 0,5 7,9 3,6
I-ML2016 ILithium-Manganese 3 30 1,8 16 1,6
I-ML2020 ILithium-Manganese 3 45 2,2 20 2
I-PD2032 I-lithium ion 3,7 75 3,1 20 3,3
SR41 Isiliva oxide 1,55 42 - 7,9 3,6
SR42 Isiliva oxide 1,55 100 - 11,6 3,6
SR43 Isiliva oxide 1,55 120 - 11,6 4,2
SR44 Isiliva oxide 1,55 180 - 11,6 5,4
SR45 Isiliva oxide 1,55 60 - 9,5 3,6
SR48 Isiliva oxide 1,55 70 - 7,9 5,4
I-SR626SW Isiliva oxide 1,55 28 0,39 6,8 2,6
I-SR726SW Isiliva oxide 1,55 32 - 7,9 2,7
I-SR927SW Isiliva oxide 1,55 55 - 9,5 2,6
VL2020 ILithium 3 20 2,2 20 2
Ukucaciswa kwe-CR2032 nama-datasheet
I-Las izici zobuchwepheshe zaleli bhethri le-CR2032 Yilezi:
Amandla: 235 mAh, okungukuthi, inganikeza ama-235 mA ngehora elilodwa noma cishe u-1 mA ngamahora ama-112, cishe ama-2 mA ngamahora ama-66, njalonjalo ...
I-Diámetro: 20 mm
Ukuqina: 3,20 mm
Uma ufuna ukulanda a Iphepha lemininingwane le-CR2032Ungaya kumawebhusayithi asemthethweni wabenzi abahlukahlukene, njengesibonelo, nansi eyodwa:
Idatha yemininingwane ye-Energizer CR2032
Ungathola izinhlobo eziningana zezixhumi emakethe yalolu hlobo lwenkinobho yeseli, njengoba ubona ezithombeni ezingenhla. Zishibhile kakhulu, futhi ungazi-solder ebhodini ngezikhonkwane ezifakiwe noma uzixhume ngqo ngezintambo, kuya ngohlobo.
Abanye izixhumi zingajwayelekile, Ngaleso sixhumi sesixhumi nethebhu ephezulu njengoba ngishilo ngenhla. Ezinye zehluke ngandlela thile, bese uvumela isitaki sishibhele ebhulohweni eliseduze. Ngale ndlela ihlala ithintana nhlangothi zombili, kepha kungaba nzima ukususa uma ubukhulu bokusebenza buncane. Kwesinye isikhathi akulula ukuyislayida bese uyifaka esikhundleni sayo.
I-PKCELL CMOS CR2032 - Ibhethri ...
Ezinye ziwuhlobo lwesiqeshana, olunendawo yokugcina ende ezobamba ibhethri phezulu bese luyicindezela ngesixhumi sesisekelo. Kukhona nokunye okufaka ibhokisi elingakwazi faka ibhethri elilodwa noma amaningi nokuthi banentambo yokukwazi ukuyixhuma kuma-jumpers kalula.
Lokhu kuphela kwesitaki se-CR2032, Ngiyethemba ngibe wusizo… Noma imiphi imibuzo noma iminikelo, ungakhohlwa ukushiya imibono yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » CR2032 ibhethri: konke mayelana namabhethri enkinobho athandwa kakhulu
Lapho ngisebenzisa iWindows Window ngangazi ukushintsha ibhethri ngoba iwashi lesistimu lalisele ngemuva kokuqalisa kabusha ngakunye. Kudala ngithuthela eLinux futhi ngabona ukuthi angikasishintshi isitaki esibi. Ku-Linux siphinde sibe nezinkinga newashi lapho ibhethri liphela?
Yebo, noma ngabe unaluphi uhlelo lokusebenza ... Ibhethri liyaphela noma kunjalo. Khumbula ukuthi ungavumelanisa iwashi lakho ne-UTC.
UJose Diaz kusho
Uyini umehluko phakathi kwe-CR2032 H ne-CR2032 (ngaphandle kwe-H)
Phendula uJose Díaz
Sawubona. Ngiyabonga kakhulu ngolwazi.
Ngicabanga ukuthi kunephutha ekhasini, noma bengingeke ngiqonde isizathu salokhu kukalwa.
Ezinye izindawo eziphakeme ngokubhekiselwe enombolweni zinikezwa ngo-mm izinombolo ezimbili zokugcina, kepha ngokhefana, okungukuthi, isibonelo, u-2032 ngu-3,2 mm. Ubeka izilinganiso ezithile ngaphandle kwalowo khoma; Isibonelo osifaka ku-CR2330 esikala u-30mm, okungukuthi, u-3cm.
I-Homemade car simulator: ungayihlanganisa kanjani igxathu negxathu